Ama-3 Essentials Amaphuzu Okugwema Ukwehluleka Kwephrojekthi IT | ITS
20 uJan 2017
Imisebenzi ivame ukungalindeleki, enezinhlamvu ezingenakubalwa futhi idlulisele ubunzima obuhlukahlukene kulabo abafakiwe. Eqinisweni iyaqhubeka ingahlali ngendlela esiyidingayo ngayo. Sivame ukuqhutshwa senziwa isicelo sokufeza okuningi ngezinga eliphansi nangesisindo esisheshayo kunalokho esikulo. Ngokuphindaphindiwe, siphumelela emizamweni yethu naphezu kwalezi ziboshwa.
Izingxenye eziningi eziyinhloko zengeze ekuphumeleleni kokusebenza, noma ngabe yiziphi izinto ezintathu ezidingekayo ezibonakalayo ezibonakalayo kanye nokuhlaziywa, ukukhulumisana okuphoqelekile, nokuhlukanisa izidingo zomsebenzi, ukuqondisa izifiso zomlingani kanye nomsebenzi womsebenzi.
Ukwandisa Izidingo, Ukulindela Abathintekayo Nendawo Yomsebenzi
Abalingani bangathonya noma bathonywe yi-venture-ngokusebenzisa ukukhetha, ukunyakaza noma umphumela-noma kungenzeka bona bazibonele. Umphumela noma ukubona umphumela kungaba okulungile noma okungalungile emvelweni.
Iningi lezinkampani zinezinombolo eziningi zobambisene nabo. Ukuqaphela bonke abalingani bakhela ukudubula kokuphumelela kokusebenza. Kumele uvikele futhi ubike idatha ebalulekile mayelana nezithakazelo, ukuxhasana, impikiswano, ukufakwa okungenzeka, futhi kube nomthelela ekuchazeni izinkampani, ukufeza kanye nemiphumela yokugcina. Ngemuva kokuthola le datha, kubonisa abalingani njengemfanelo yabo. Lokhu kuzokwenza kube nzima ukudala uhlelo lokubhekana nawo wonke umlingani. Ukugxila okugxilwe ekuxhumaneni okuyinhloko kuyisisekelo sokufeza ukusebenza.
Ungayibheka kanjani izifiso? Ngokuxhumana. Kuyinto ebaluleke kakhulu ukuthi kukhona ukukhulumisana okuvelele kakhulu okuhlela okwenziwe ngokwezifiso ukuvumelanisa ukusebenzisana nabalingani.
Ingxenye eyodwa ye-intuition eyisisekelo ukufunda ngokukhuluma. Uhlelo lweProjekthi Management Institute (PMI®) lubonisa ukuthi amaphesenti angu-90 emisebenzi yomqondisi wokuxhumana, kungakhathaliseki ukuthi kungenzeka, akugcini nje ukukhuluma nje. Ukukhulumisana okusemthethweni kuhlanganisa ukuhlela, ukusebenzisa imibiko, ukudala imibiko, ukuhlunga idatha kuqala ngokuhlangana okulodwa bese ungena olandelayo, njalonjalo. Ukwenza lokhu ngokwanele, udinga yonke indawo ehambisana nokuphathwa kokuxhumana. Ukukhiqizwa kwanoma yikuphi ukulungiswa okunjengale kungabahlukaniswa emibuzweni eyisithupha okufanele ibuzwe ngokungapheli: Ngubani, nini, nini, kuphi, kanjani futhi ngani?
Ubani okufanele anikezwe?
Yini okufanele inikezwe?
Ngesikhathi lapho lokhu kudinga khona?
Kumele kwenzeke kuphi?
Kungani kufanele kwenzeke?
Ngaphambi kokuqala ukusebenza kwakho, qinisekisa ukuthi uye waqonda yonke imigomo, izindawo kanye nezinto ezidingekayo. Ukucaca kulokho okudingekayo futhi ekugcineni ukhethe ukuthengwa kusuka kubalingani obalulekile kukhona okuphuthumayo. Lezi zidingo, ngokuhambisana nezinhloso ezihlobene, izinhloso kanye nokunikezwa, ziphenduke izinga lomsebenzi okumelwe uqedwe futhi lizocwengulwa ngaphezu kokuphila kwakho. Yiba ngangokunokwenzeka, uma kungenzeka ukuthi ungaqali ngokuqonda okuqinile ngalokho okuzama ukukufeza, akufanele uqale nganoma yisiphi isici somcabango.
Kuyoba nzima, uma kungenakwenzeka, ukwenza inqubekela phambili embonweni wabalingani uma kukhona ukungabi khona kokucaca mayelana nokuqonda nokuzifunela kwabo. Yingakho abalingani kumele bahlukaniswe futhi izifiso zabo zihlukaniswe kahle ngesikhathi esifundweni sokuphila njengoba kungalindelwa ngaphansi kwezimo.
Ukugcina izici ezintathu ezibalulekile-ubufakazi obubonakalayo nokuhlaziywa kwabalingani bokuzibandakanya, ukudala kanye nokusetshenziswa kokuxhumana okuphoqelelayo, nokufakaza okucacile kokusebenza okudingekayo, izifiso zomlingani kanye nokuwohloka okuphelele komsebenzi-ekungeneni kwegazi phakathi kokuhlelwa kokusebenza futhi ukubulawa kuthuthukisa kakhulu amandla okuthuthukisa.